ဇူလိုင် ၃၀၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၃၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပြဿနာများအား အစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ နှင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အခြေအနေမှန်များအား နိုင်ငံတကာမှသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်မှု အခြေအနေ များအားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားလကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျမွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံ တှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ သံရုံးမှတာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေ
အတှငျး ဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ ပွဿနာမြားအား အစိုးရနှငျ့ တပျမတျောမှဖွရှေငျး ဆောငျရှကျနမှေုမြားတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား နှငျ့ ဖွဈစဉျဖွဈရပျအခွအေနမှေနျမြားအား နိုငျငံတကာမှသိရှိအောငျဆောငျရှကျပေးနိုငျရနျလိုအပျမှု အခွအေနေ မြားအားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ Admin 0